Waalidiinta Caruurtooda loo qaaday Eritrea oo loogu baaqay in ay Degaan Ilinka Villa Somalia | SMC
Home WARARKA MAANTA Waalidiinta Caruurtooda loo qaaday Eritrea oo loogu baaqay in ay Degaan Ilinka...
Waalidiinta Caruurtooda loo qaaday Eritrea oo loogu baaqay in ay Degaan Ilinka Villa Somalia
Waxa uu sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ugu baaqay Waalidiinta caruurtooda maqan yihiin hadii jawaab ka waayaan Madaxweynaha in ay degaan ay ilinka Vila Somalia kana dhaqaaqin halkaas ilaa iyo inta ay jawaab cad ka helayaan.
‘”Masuuliyadda wiilasha maqan waxey marka koowaad ku dhaceysaa Madaxweynaha oo ah taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida. Marka xigana taliyaha hay’adda nabadsugidda oo isagu qoray dhallinyarada una diray dalka Eritrea. Labadooda ayaa laga rabaa in ay qanciyaan waalidiinta wiilashooda weysan, madaxweynuhu waa in uu la kulmaa waalidiinta, xaq ayey ugu leeyihiin in uu qanciyo. Haddii uu diido waalidiintu waa in ay ilinka Vila Somalia degaan, kana dhaqaaqin ilaa iyo inta ay jawaab cad ka helayaan.” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay wiilashada askarnimada loogu qaaday Eritrea aan la qafaalin balse halkaasi dowlada geesay, waxa uuna ugu baaqay Madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin in runta u sheegay Waalidiinta walaacsan. ”Wiilasha ciidanka iyagaa qortay ee lama qafaalin, mana aha ciidan nabad ilaalin dal kale loogu diray. Madaxweynaha iyo taliyihiisa NISA waa waalid ubad leh, waxba yaysan meelo kale ku meeraysan ee haddii uusan warku jirin, waalidiinta iyo wiilashooda ha wada hadalsiiyaan, haddii uu dhab yahayna ha qirteen, waa lagula xisaabtamayaahe.” ayuu yiri Mr Warsame. Hadalka siyaasigan mucaaradka ah ayaa kusoo aadaya xili xalay Wasiirka Warfaafinta Xukuumada Soomaaliya beeniyay wararka sheegaya in dhalinyaro tababar loogu qaaday dalka Eritrea la galiyay dagaalka Itoobiya laguna laayay halkaasi.
Previous articleTPLF oo laga saaray Diiwaanka Xisbiyada Itoobiya
Next articleDEG DEG: Qarax Xooggan oo goordhow ka dhacay Muqdisho & rasaas la maqlayo